Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa sheegay in iskaashiga Asxaabta Mucaaridka ah ee UCID iyo WADDANI… | Salaan Media
Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa sheegay in iskaashiga Asxaabta Mucaaridka ah ee UCID iyo WADDANI…
Hargeysa(SM)-Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro), ayaa sheegay in iskaashiga Asxaabta Mucaaridka ah ee UCID iyo WADDANI meesha ka saarayo habacsanaantii ka muuqatay ee dhanka mucaaridada.
Mr Cirro ayaa sidaasi ka sheegay munaasibadii laba xisbi isku bahaysteen, waxaanu tilmaamay in maadaama labadii xisbi Mucaarid isku waafaqeen iskaashi lagu toosinayo xukuumadda, laga maarmayo ujeedadii loo aasaasay Golaha Wada-tashiga iyo Toosinta Qaranka, isla markaana xilkii ay hayeen mudada kooban ay dib ugala soo noqonayaan Xisbiyadu.
“Golaha Wada-tashiga Qaranka Maalintii lagu dhawaaqayay waxay yidhaahdeen waxa nagu khasbay Golahan Xisbiyadii Mucaaridka ahaa oo hawshoodii Gabay, markaa maanta waxaan leeyahay waa kuwaa labadii Xisbi midoobay oo Xilkii waa laydinka qaaday”ayuu ka sheegay Munaasibadii ay Maanta Xisbigiisa iyo Ucid kaga dhawaaqeen Iskaashiga siyaasadeed.
Golaha ismagacaabay ee Wada-tashiga iyo Toosinta Qaranka ayaa hore u sheegay in ujeedada aasaaskoodu ka dambeysay, ka dib markii ay xukuumaddu ku keliyaysatay saaxada siyaasada, lana tebay Asxaabtii Mucaaridka, taasina ay dhinac ka rartay hanaanka dawladnimo ee dalka u yaala.
Hadalkan Guddoomiye Cirro ayaa muujinaya in sababta ay labada xisbi u mudoobeen ay tahay sidii ay u difaacan lahaayeen kaalintooda Mucaaridnimo, balse Guddoomiyaha Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe ayaa hore uga tirsanaa Golahan, isla markaana lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay ashkhaasta ugu miisaanka culus ee jaan-gooya talaabooyinka la qaadayo.